Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Goobaha Safarka ugu Fiican 2022
Lonely Planet ayaa maanta daaha ka qaaday 10-ka waddan ee ugu sarreeya, magaalooyinka iyo gobollada ay booqan doonaan sannadka soo socda iyada oo la sii daayay barnaamijka ugu Wanaagsan ee Lonely Planet in Travel 2022.
Safarka ugu fiican 2022 waa Lonely Planet ururinta sanadlaha 17aad ee meelaha ugu kulul aduunka iyo khibradaha safarka ee sanadka soo socda. Daabacaaddani waxay si gaar ah xoogga u saaraysaa khibradaha safarka ee waara ee ugu wanaagsan - hubinta in socdaalayaashu ay saameyn togan ku yeelan doonaan meel kasta oo ay doortaan inay aadaan.
Meel fog oo si sharaf leh u madax bannaan jasiiradda Cook Islands - oo ka mid ah waddamada ugu yar adduunka - ayaa sheeganaysa kaalinta la jecel yahay inay tahay waddanka koowaad ee la raadinayo 2022, halka Norway ay gashay kaalinta labaad iyo Mauritius saddexaad.
Gobolka Lonely Planet's nambar-koowaad ee 2022 waa Westfjords, Iceland, oo ah gobol ka mid ah jasiiradda jasiiradda oo aan la taaban dalxiiska ballaaran halkaas oo bulshooyinku ay ka wada shaqeynayaan ilaalinta iyo kor u qaadista muuqaalkooda quruxda badan. West Virginia, USA ayaa soo gashay kaalinta labaad, waxaana ku xiga Xingshuabanna, Shiinaha.
Magaalada Number-one Auckland, New Zealand waxaa loo aqoonsaday goob dhaqameedkeeda ubaxa ah halkaas oo tooshka lagu ifinayo hal-abuurka maxalliga ah, halka Taipei, Taiwan ay ku jirto kaalinta labaad, iyadoo Freiburg, Germany ay ku jirto kaalinta saddexaad.
Sannad kasta, Liisaska ugu Wanaagsan ee Lonely Planet ee socdaalka waxay ku bilowdaan magacaabid ka timid bulshada ballaaran ee Lonely Planet ee shaqaalaha, qorayaasha, bloggers, la-hawlgalayaasha daabacaadda iyo in ka badan. Magacaabista waxaa hoos u dhigaya guddigayada khubarada socdaalka ee 10 waddan, 10 gobol iyo 10 magaalo. Mid walba waxaa lagu doortaa mawduuciisa, waayo-aragnimadiisa gaarka ah, 'wow' factor iyo sida ay uga go'an tahay dhaqannada dalxiiska waara.
Sida laga soo xigtay Lonely Planet's VP of Experience Tom Hall siideynta "Liiska kulul" ee sannadlaha ee Lonely Planet ee meelaha iyo khibradaha safarka ma noqon karto waqti ka badan. "Kadib hakad la dhaqan galiyay, waa waqtigii laga saari lahaa qorshayaasha safarka ee mudada dheer dib loo dhigay ee shelf lagana dhigi lahaa mid dhab ah," Hall ayaa ku yiri sii deynta liiska maanta.
"Liisasku waxay u dabaaldegaan adduunka dhammaan noocyada xiisaha leh ee cajiibka ah," Hall wuxuu sii wadaa. "Laga soo bilaabo harooyinka iyo kaymaha Cook Islands ilaa biyaha iyo buuraha Iceland ee Westfjords, iyada oo loo sii marayo Auckland ee dabiiciga ah iyo raaxada magaalooyinka."
Sida had iyo jeer Lonely Planet's ugu Wanaagsan ee Safarka waxay keentaa safarro cusub oo lagu tago meelaha caanka ah sida Norway iyo Dublin, Ireland, waxayna soo saartaa qaar ka mid ah dhagaxyada aan caanka ahayn sida Shikoku, Japan iyo Australia ee quruxda quruxda badan iyo magaalada ugu waarta ee Jarmalka Freiburg."
Meeraha Keliga ah ee ugu Wanaagsan Safarka 2022 - Meesha 10-ka ugu sarreeya
10ta Dal ee ugu sareeya
1. Jasiiradaha Cook
10ka Gobol ee ugu sareeya
3. Xishuangbanna, Shiinaha
7. Lamadegaanka Atacama, Chile
8. Rimka muuqaalka leh, Australia
9. Jasiiradda Vancouver, Canada
10ka magaalo ee ugu sareeya
6. Nicosia/Lefkosia, Qubrus
Oktoobar 29, 2021 at 12: 02